Zụrụ Bitcoin na Dominica n'otu ntabi anya na Nchekwa | Paxful
Zụta Bitcoin ozugbo na Dominica
Paxful bụ ebe kachasị mma Iji zuta Bitcoin ozugbo na usoro ọkwụkwụụgwọ ọ bụla. Ugbua à ịnwere ike ịzụ ahịa Bitcoin nye usoro ọkwụkwụụgwọ ọ bụla na ụzọ dị ọsọ, mfe, na usoro nchekwa ndị Paxful nyerel.
Tinye ego na Bitcoin n'ụzọ dị mfe na nchekwa. Paxful bụ ebe kachasị mma iji zụta, ree ma zipụ Bitcoin ihe karịrị ụzọ 300 iji kwụọ ụgwọ Bitcoin gụnyere nnyefe ego, kaadị onyinye, Paypal, Western Union, Moneygram, debit gị na kaadị akwụmụgwọ na ọtụtụ ndị ọzọ!
Ebumnobi orire na ozuzu ahịa dị elu maka Eastern Caribbean dollar na Dominica
Kwụọ ụgwọ na
Ọnụọgụgụ kacha nta—kacha Ukwu
Nke kachasị nta
N'elu Dollar ahu
Ịnwere ike ịzụta nkezi ọbụla
Nọ n'ịntanetị PayPal — Instant Release
ndị enyi na ezinụlọ
55.00-209.00 XCD 55.00 XCD $0.87 Zụta 119,020.13 XCD Zụta Zụta
Ahụla awa 1 ago PayPal — Instant Release
75.00-151.00 XCD 75.00 XCD $0.79 Zụta 130,306.52 XCD Zụta Zụta
Usoro ọkwụkwụụgwọ dị elu na Dominica
Paxful na-eme ka ọ dịrị gị mfe ma nwee nchekwa maka ịzụta ma ijide Bitcoin. Chọta ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa kachasị mma n'okpuru ma zụta Bitcoin na Nyefe Ụlọakụ taata.
Zụta Bitcoin na Nyefe Ụlọakụ
Paxful na-eme ka ọ dịrị gị mfe ma nwee nchekwa maka ịzụta ma ijide Bitcoin. Chọta ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa kachasị mma n'okpuru ma zụta Bitcoin na PayPal taata.
Zụta Bitcoin na PayPal
Paxful na-eme ka ọ dịrị gị mfe ma nwee nchekwa maka ịzụta ma ijide Bitcoin. Chọta ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa kachasị mma n'okpuru ma zụta Bitcoin na Skrill taata.
Zụta Bitcoin na Skrill
Kaadị Kredit/akwụmụgwọ ỌƁỤLA
Paxful na-eme ka ọ dịrị gị mfe ma nwee nchekwa maka ịzụta ma ijide Bitcoin. Chọta ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa kachasị mma n'okpuru ma zụta Bitcoin na Kaadị Kredit/akwụmụgwọ ỌƁỤLA taata.
Zụta Bitcoin na Kaadị Kredit/akwụmụgwọ ỌƁỤLA
Kwụọ ụgwọ WeChat
Paxful na-eme ka ọ dịrị gị mfe ma nwee nchekwa maka ịzụta ma ijide Bitcoin. Chọta ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa kachasị mma n'okpuru ma zụta Bitcoin na Kwụọ ụgwọ WeChat taata.
Zụta Bitcoin na Kwụọ ụgwọ WeChat
Kaadị ọnyinye Amazon
Paxful na-eme ka ọ dịrị gị mfe ma nwee nchekwa maka ịzụta ma ijide Bitcoin. Chọta ebumnobi orire na ọzụzụ ahịa kachasị mma n'okpuru ma zụta Bitcoin na Kaadị ọnyinye Amazon taata.
Zụta Bitcoin na Kaadị ọnyinye Amazon
Gịnị bụ Paxful?
Paxful bụ ahịa nke Bitcoin isi n'otu ọgbọ fere n'otu ọgbọ na ejikọta ndị na azụ ahịa na ndị na ere ahịa. Nanị họrọ otu ị chọrọ ịkwụ ụgwọ ma pịnye Bitcoin ole ị chọrọ.
Ebumnuche anyị bụ inye ndị na arụ ọrụ platfọm di mfe, ziri ezi ma nwee ntụkwasị obi maka ịzụ ahịa ọrụ ha. Ọtụtụ mgbe, nnukwu nsogbu anyị gbasara ego, ịkpata ya na ibupu ya. Anyị raara onwe anyị nye ịmeghe ikike nke ndị mmadụ site na iwulite platfọm isi n'otu ọgbọ fere n'otu ọgbọ zuru ụwa ọnụ maka ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa nke ọdịnihu. Paxful bụ PayPal + Uber na ndị Wall Street.
Enwere m ike ire Bitcoin na Paxful?
Nyere ndị ọzọ aka na Dominica inweta Bitcoin maa ịnwere ike irite NNUKWU uru ruo 60% na azụchaa ahịa ọ bụla. Bido iji akaụntụ ụlọakụ mpaghara ere ihe ugbu a, lee ntuziaka anyị n’efu. Paxful na enweta ndị na azụta Bitcoin karị 1000 site na Dominica kwa ụbọchị.
Mepụta akaụntụ ma malite ire
Nweta Ego Ntughari
Imaara ọtụtụ ndị chọrọ ịzụ Bitcoin na Dominica? Site na Obere ụlọahịa Bitcoin na Gbakwụnye Programụ ị na enweta 2% na azụmaahịa ọ bụla ruo mgbe ebighi ebi site na ịkekọrịta njikọ. Bido ugbu a.
Zụta Bitcoin ugbu a na ụzọ masịrị gị ịkwụ ụgwọ Zụta Bitcoin ugbu a